सरकारलाई नचलाऔँ, आफ्नो गाउँ आफैँ जोगाऔँ
एसबी खड्का काठमाडौं, ७ जेठ
सङ्घर्ष, आशा, भरोसा र विश्वासका बीच दुनियाँ आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो । सबैका आआफ्नै कथा, व्यथा छन् । सुन्दर भविष्यको खोजीमा सपना देख्ने र भत्किने क्रम निरन्तर थियो । छिमेकी देश चीनको वुहान शहरमा सन् २०१९ को अन्त्यतिर थियो । त्यही शहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वभर फैलियो ।
सुरुमा कसैले कल्पना गरेको थिएन- कोरोना विश्वको प्रत्येक कुना काप्चासम्म पुग्छ भन्नेमा । आधा विश्वमा कोरोना पुगिसक्दा पनि हाम्रो सरकार भने नेपाल कोरोनामुक्त देश भन्दै संसारभरका पर्यटकलाई नेपाल बोलाउने प्रचार प्रसारमै व्यस्त थियो ।
कोरोना नेपालमा पनि आउला के भनेर कताकता मनमा च्वास्सच्वास्स डर बेलाबेलामा आइरहन्थ्यो । त्यसैबेला नेपालका एक जना वरिष्ठ चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षिततले दिएको कोरोना भाइरसको जोखिमबारेको अन्तर्वार्ता भाइरल भयो । तब सरकार निद्राबाट ब्युँझियो र त्यसको भोलिपल्टै ६ चैतमा हुन लागेको एसईई र त्रिविका सबै परीक्षा रोकियो ।
त्यसपछि सबै एकाएक अत्तालिए र आफ्ना झोला झिम्टी बोकेर आफ्ना गाउँतिर फर्किनेको लर्को लाग्यो । शहर सुनसान बन्दै गए । त्यसको ठीक ५ दिनपछि अर्थात् ११ चैतमा १ जना १९ वर्षीया युवतीमा कोरोना भएको पुष्टि भयो । त्यसपछि त्राससँगै सुरु भयो लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी, जुन नेपालीले यसअघि कहिल्यै भोगेका थिएनन्, मात्र विरलै सुनेका थिए ।
आज बन्दाबन्दीको २ महिना पुग्न लाग्यो तर सरकारले भने कोरोना नियन्त्रणको उपलब्धिका रूपमा बन्दाबन्दी पटक पटक थप्नेभन्दा अरू विकल्प ल्याउन सकेको छैन ।
महामारी कोरोनाबाट विश्वमा शक्तिशाली मानिएका देश नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । अहिलेसम्म विश्वमा ३ लाख २५ हजारले ज्यान गुमाएका छन् भने साढे ४९ लाखमा संक्रमण फैलिएको छ ।
विश्वका कुल २ सय १५ राष्ट्रमा यो फैलिँदा अमेरिकामा झण्डै साढे १५ लाख संक्रमितका साथ प्रथम स्थानमा छ भने सेन्ट प्रिरेरी मिकोइनु १ जना सङ्क्रमित बिरामीका साथ २ सय १५औँ स्थानमा हुँदा नेपाल ४ सय २ संक्रमितका साथ १ सय ३३औँ स्थानमा छ ।
रसिया, बेलायत. जर्मनी, इटाली, ब्राजिल, स्पेन, फ्रान्स, टर्की र इरान जस्ता देशहरू 'टप टेन'भित्र कोरोना संक्रमितको सूचीमा छन् ।
यो आँकडाबाट हामीले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने, कोरोनाबाट बच्न सुविधा सम्पन्न अस्पताल र शक्तिशाली सरकार मात्र पर्याप्त रहेनछ, गगनचुम्बी महल र लोभलाग्दा सुन्दर शहर भएका वस्ती अनि आकर्षक शरीर भएका अत्यन्तै उच्चकोटिको जीवनशैली भएका पनि नहुने रहेछ ।
यदि विदेशमा जस्तो स्थिति नेपालमा आयो भने के होला ? सरकारले कसरी रोकथाम गर्न सक्छ ? पूर्वतयारीमा सरकार निदाएको जस्तो देखिन्छ । लकडाउनको २ महिनाको अवधिमा के गर्‍यो सरकारले ?
नेपालले कोरोनाबाट बच्न पर्याप्त समय पाएको हो । अझै पनि पशुपतिनाथको कृपाले नेपालमा महामारीको रूप लिइसकेको छैन । झण्डै २ महिना सरकारले जनतालाई थुनेर गर्नुपर्ने कामहरू नगरी कहिले अध्यादेश त कहिले सांसद जबर्जस्ती उठाउने अनि कहिले सत्तारुढ दलभित्रै कुर्सीका लागि आन्तरिक किचलोमा रुमलियो ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि मेडिकल सामग्रीमा कमिसन र भ्रष्टाचार काण्ड, राहत वितरणमा अनियमितता हुनुले सरकार कहाँ छ भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । सरकारको कार्यशैली 'काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' जस्तै देखिन्छ ।
अब यस महामारीबाट बच्ने नै हो भने सरकारलाई नचलाअौँ, आफ्नो गाउँ आफैँ जोगाअौँ अनि मात्र तपाईं, हामी र म हुँदै यो देश बच्न सक्छ ।
लकडाउनको सदुपयोग गर्दा आज विश्वका केही मुलुक कोरोनाको भुमरीमा फसेर पनि उम्किन सफल भएका छन् । कैयौँ सफल हुने बाटोमा निरन्तर अगाडि छन् ।
तर, यहाँ कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । देश र जनताले कोरोनासँग मात्र होइन, भोक, शोक, जल उत्पन्न प्रकोप, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाबाट सिर्जना हुने दर्जनौँ प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैले भुसको आगोझैँ फैलिँदै गएको कोराना संक्रमण र सम्भावित अन्य समस्याबारे तयारी प्रत्येक गाउँ टोलबाटै थालिनु जरुरी छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर समुदायस्तरबाटै लागौँ र बचौँ अनि मात्र अन्य सम्भावित जोखिमबारे लड्न सहज हुनेछ ।
आफ्नो गाउँ ठाउँलाई कसरी जोगाउने ?
अहिले सबैले भन्ने गर्छन्, ‘स्टे होम, स्टे सेफ ।’ अनि मास्क लगाअौँ, हात पटक पटक धुने गरौँ, स्यानिटाइजर हातमा दलौँ । तर, कसैले भन्दैन समुदायमा के गर्नुपर्छ ? कसैलाई वास्ता छैन पल्लो गाउँमा कोको कहाँकहाँबाट आए ?
१) आआफ्नो गाउँमा भएका कम्तीमा ३ देखि ५ वटासम्म टोल विकास संस्थाबीच समन्वय गरौँ । चार किल्ला तोकेर क्लस्टर निर्माण गरौँ ।
२) उक्त कलस्टरभित्रका टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीबीच सामाजिक दूरी कायम गरेर समन्वय गर्दै कोरोनाको सम्भावित जोखिम र संक्रमण नियन्त्रणबारे स्वत:स्फुर्त कार्ययोजना बनाअौँ ।
३) जनचेतनाका लागि माइकिङ र लकडाउनलाई सही तरिकाबाट परिपालना भए/नभएको, नियतवस उल्लङ्घन र अवान्छित गतिविधि गर्नेलाई सामूहिक कार्बाही र बहिष्कारसम्म गरौँ । अनुगमन टोली बनाअौँ ।
४) उक्त क्लस्टरभित्र भएका दीर्घ रोगी, गर्भवती र उच्च रक्तचाप र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीबारे जानकारी राखौँ ।
५) दैनिक गुजारा चलाउन अप्ठ्यारोमा परेका मजदुर र सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी राखौँ ।
६) बाहिरबाट आउने नयाँ व्यक्ति र अतिजरुरी कामले बाहिर जाने व्यक्तिबारे अनिवार्य जानकारी राखौँ । अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्न लगाअौँ ।
७) स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गरी अगाडि बढौँ ।
८) कोही कसैलाई अप्ठ्यारो परेमा आवश्यकता हेरी सरकार र समुदायस्तरबाट सहयोग गरौँ ।
९) गाउँ, टोलमा आवश्यकताअनुसार मास्क, साबुन, स्यानिटाइजर वितरण गरौँ ।
१०) आफ्नो क्लस्टरबाहिर अन्य क्लस्टरबीच अनुभव र अवस्थाबारेको जानकारी आदान प्रदान गरौँ ।
११) सामाजिक दूरी कायम गर्दै आर्थिक तथा कृषिसम्बन्धी कार्यलाई सुचारु गरौँ ।
१२) नगरी नहुने सामाजिक घटना मृत्युु संस्कारका लागि मलामी जाँदा सामाजिक दूरी कायम गरौँ, विशेष गरी क्रियापुत्री र मानो मिसाउने कार्य गर्दा विशेष सतर्क बनौँ । फलफूल र चिया-पानी खुवाउने काम रोकौँ । समुदायमा नगरी नहुने र नगई नहुने सामाजिक काममध्ये यो एउटा प्रमुख सामाजिक कार्य हो ।
१३) क्लस्टरभित्र कोरोना भए, नभएको बारे तीव्र परीक्षण गर्न स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाअौँ ।
कोरोना महामारीबाट बच्न अब सरकार वा अरू कसैको मुख ताकेर बस्नु निकै महँग‍ोसमेत पर्न सक्छ । त्यसैले सबैले समुदायस्तरबाटै आजैदेखि स्वत:स्फुर्त रूपमा जुटौँ । सामाजिक स्तरमा नेतृत्व लिन चाहने जो कोहीका लागि आफू बसेको गाउँ ठाउँको असली परिचय दिने र नेतृत्व क्षमता देखाउने यो एउटा अवसर हो ।
यसरी आआफ्नो गाउँ ठाउँलाई छिटोभन्दा छिटो कोरोनामुक्त बनाएर यसको प्रभावबाट सिर्जित तथा सम्भावित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याबारे जुध्न तयारी अवस्थामा बस्दै समाज, देश जोगाउने दिशामा अगाडि बढौँ । आशा गरौँ, देश आउँदा दिनमा पुनः समृद्धिको सुनौलो यात्रामा अगाडि लम्किनेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ७, २०७७, १४:५१:००